musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Skyward Express Passenger Plane yakarova muKenya
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • chengetedzo • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vanofamba nendege yekutengesa yeSkyward Express muKenya vakaita rombo rakanaka apo vakapunyuka kukuvara nekufa mushure mekudonha munzvimbo iri kure yenyika.
Zano revatakurwi renharaunda rinoshandiswa nenjodzi yeSkyward Express radzika muKenya masikati ano.
Kubata kuKenya Civil Aviation Administration vese vafambi vakapunyuka mundege. Hapana mhosva dzakataurwa
Ndege yakapunzika yakamhara pakamba yemauto eKKenya muElwak, mudunhu riri kure Mandera
Ndege diki dzevatakurwi dzinoshandiswa neNairobi-based s Regional airline Skyward Express akakwanisa kupaza ivhu muBoru Hache padhuze neKenya- Somaliya - muganho weEthiopia.
Ndege inoita kunge iri Dash8- Q 300
Mandera ndiro guta guru reMandera County mune yaimbova North Eastern Province yeKenya. Iyo iri panenge pakatenderedza 3 ° 55'N 41 ° 50'E, padyo nemuganhu neSomalia neEthiopia.
Skyward Express, inendege yakazvimirira inoshanda muKenya. Iyo inoshandira nzvimbo dzemuno, kubva kune ayo maviri mashandiro mabhesi paWilson Airport yevatakurwi uye Jomo Kenyatta International Airport yemutoro. Ndege mbiri idzi dziri muNairobi, guta guru reKenya.
Ndege inochengetedza dzimbahwe rayo paWilson Airport, mukati meNairobi, guta guru reKenya uye guta guru renyika. Wilson Airport inowanikwa anenge mashanu makiromita (5 mi), nemugwagwa, kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta riri pakati.
Iyo ndege inochengetedza chivakwa chakazvimirira paWilson Airport, kuitira chete kushandiswa kwevashandi veSkyward Express nevatengi. Chivako ichi "chakashongedzerwa neyekudyira yemazuva ano", pakati pezvimwe zvakanaka.
Skyward Express yakavambwa mu2013, nevatyairi vaviri; mumwe wavo anoshanda sachigaro wendege, nepo mumwe achishanda semaneja maneja. Skyward Express yakagara nhaka zvimwe zvekushandisa uye neimwe nzira kubva kune chisina basa Skyward International Aviation.
Nekumiswa kwebasa neSkyward International Aviation, ivo vaviri vane marezinesi ekutyaira ndege, Mohamed Abdi uye Issack Somow yakatanga Skyward Express uye yakatanga kuita zvekushambadzira mu2013. Pakutanga, ndege iyi yakapa charter yevatakuri uye basa rekutakura zvinhu pakati peNairobi, Kenya, nenzvimbo dziri pedyo neSomalia. Aya masevhisi aisanganisira kutumirwa kwemiraa kubva kuNairobi kuenda kuSomalia.
Nekuwanikwa kwendege dzakawanda, ndege iyi yakawedzera uye kusiyanisa vashandi vayo uye nhumbi dzekutakura zvinhu kuti dzibatanidze kwedzinosvika uye mafambiro kune akapfuma-oiri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweKenya madunhu uye nzvimbo dzekushanya dzemahombekombe.